Sidee si ay u gudbiyaan Xiriirada ka iPhone in iPad
Inta badan dadka isticmaala waxaa ka warqabin xaqiiqada ah in xogta ka iPhone gudbaayo iPad waa mid ka mid ah maaddooyinka ugu fudud ee jeer oo dhan. Waxaa sabab u ahaa xaqiiqada ah in macruufka xogta qalabka kala iibsiga u dhexeeya mid ka mid kale oo fudud oo toos ah hab oo hubinaya in iimaanka user ee la soo celiyo ee Apple ayaa technology. Waxaa oo dhan waxaa sabab u ah xaqiiqada in dadka isticmaala ay yihiin oo keliya ma aydaan dhigin dhinaca qalabka Apple laakiin waxaa jira rabitaan wanaagsan ee qalooca baahida user iyo sidoo. Kala beddelashada xiriirada ka iPhone in iPad waa wax la samayn karo qasabno fudud oo kaliya, sidaa daraadeed isla user ma u leeyihiin in ay wax ka qaban dheeraad ah ama loo soo dajiyo kasta oo software dheeraad ah si aad u hesho shaqada samaysay sidii oo dhan functionalities waxaa lagu dhisay in ay jiraan in ka macruufka si aad u hubiso in natiijada ugu wanaagsan waxaa lagu gaari oo ay muujiyaan saaxiibtimo user ee khayriga Apple ah. Ma aha oo kaliya xiriirada loo gudbin karaa laakiin dhamaan noocyada kale ee warbaahinta sida sawiro, albums, durdurro leh, duub camera iyo xataa gabayo loo gudbin karaa iyada oo loo marayo farsamooyinka in la soo sheegnay doonaa tutorial this. Dhuujin suunka sida safarka ee sahaminta bilaabmaa aan ay nasasho kasta.
Qaybta 1aad: Sida loo hagaagsan xiriirada ka iPhone in iPad la iCloud
Qeybta 2: Mid ka mid ah iPhone click inay kala iibsiga iPhone (daaqadaha / Mac)
Waa su'aal u jawaabi karaa iyadoo la isticmaalayo qaababka ugu wanaagsan ee lagu dhisay in oo dhan taas oo ah si loo hubiyo in heerka user qanacsanaanta ay raadinayso waxaa la kulmay dib u dhac kasta oo aan. Si aad u hesho wax ku sameeyo sida rabitaan soo socda waa hab ah in ay tahay in la raaco arrintan la xiriira.
User 1. baahan yahay si ay u helaan jid goobaha> iCloud> Kaydinta iyo gurmad.
User 2.Beerta markaas u baahan yahay inuu ka soo leexdo in gurmad iCloud ah.
Gurmad 3.Beerta hadda doorasho ka dibna in la daah furo.
4.Now dib u soo celinta gurmad ah waa in la sameeyo on iPad oo noo ogolaan doonaa si ay u gudbiyaan xiriirrada oo dhan macluumaad kale oo si iPad. Waayo, kanu user ay u baahan tahay in ay simbiriirixan screen ugu weyn ee iPad ah u bilowdo hawsha.
5.The luqad ku habboon sida ay tahay doonista iyo rabitaan ee user waxaa markaas waa in la soo xulay oo inta badan kiisaska noqon lahaa Ingiriisi.
6.The doorashada dalka timaada.
Xiriir 7.The Wi-Fi in ay tahay in la isticmaalo waa in la xushay in tallaabada xigta si loo hubiyo in isku xirnaanta Internet-ka marna soo dhibtay.
Dib u soo celinta 8.The iCloud waxaa markaas oo laga soo xulay shaashadda soo socda.
9.The screen socda weydiin doonaa user ku darto macluumaad ku habboon in ay ku talaabsato.
10.Sida shuruudaha iyo xaaladaha aqbalo timaada taas oo uu leeyahay in la sameeyo laba jeer.
11.Now gurmad ah in loo abuuray dhawaan ay tahay in la soo xulay si ay u gudbiyaan xogta oo dhan si ay iPad ay ka mid yihiin xiriirrada iyo faahfaahinta la xidhiidha iyo nidaamka halkan hakisey hawshii.
Qeybta 2: Mid ka mid ah iPhone click inay kala iibsiga iPhone ( daaqadaha / Mac )
Inta badan barnaamijyada software in la dhisay iskutallaabta madal iyo sidoo kale macluumaadka OS isku wareejin waxaa lagu sameeyey si adag in dadka isticmaala aanay awoodin in ay isticmaalaan functionalities ee buuxa. Wondershare Waa ogyahay arrimaha in dadka isticmaala ay wajihi arrintan la xiriira oo halkan ay had iyo jeer waa tallaabo hor dadka kale marka ay timaado in ay ka gudbaan madal wareejinta xogta iyo sidoo kale tabo cusub ee technology. Jaanqaadayo isla shirkadda ayaa bilaabay Wondershare MobileTrans ayaa la dhisay si ay u hubiyaan in sifooyinka wanaagsan ee aan gundhig kaliya laakiin fiirin guud ee barnaamijka software la sameeyo user saaxiibtinimo oo. Software Tani waxay u ogolaaneysaa dadka isticmaala si ay xog ka mid qalab wareejiyo mid kale oo hab qaab beddelidda waa sida in dadka isticmaala marnaba wajihi arrin kasta oo arrintan la xiriira. Maxaa yeelay, dhammaan dadka isticmaala kuwa ogyahay barnaamijyada software kala iibsiga phone 1 click ayaa sidoo kale in la hubiyo in barnaamijkan waxaa loo isticmaalaa sida interface user waa mid aad u saaxiibtinimo oo halkan isticmaala si sahlan, qanacsanaanta wareejin karaan xogta iyo koontaroolaan in ay Xogta loo kaydin doonaan, sii in gacmaha warshadaha ugu fiican oo loo gudbin doonaa sida ay tahay doonista iyo rabitaan. Helitaanka ugu wanaagsan ee reer barnaamijka software-ka ayaa suuragal ah keliya haddii isticmaala ogyahay faa'idooyinka in xidhiidh la leh yihiin. Ka dib markii qaar ka mid ah faa'iidooyinka ka mid ah iyadoo la isticmaalayo barnaamijka software oo lagu soo bandhigay si loo hubiyo in dadka isticmaala ay si caqli ah u dooran oo ay waqti iyo lacag badbaadiyo.
1.It waa ammaan in la isticmaalo marka la barbar dhigo barnaamijyo software ah ku sifayn la mid ah sida ma jiraan wax isku xirnaanta Internet-baahan yahay sidaa darteed ma xogta lumitaanka ama tuugada waa suurto gal.
2.It ka mid qalab wareejin karaan dhammaan xiriirrada si kale oo aan wax dhibaato ah iyo isku Sababta waxa ay sidoo kale waa in la ogaadaa in software la qiimeeyo sare oo dhan macaamiisha ku Gatay ama isku dayaan.
photos 3.All ay ka mid yihiin kitaabkii duudduubnaa ee camera, maktabadda sawir, albums oo sawir leh iyo durdurrada sawirka ayaa loo gudbin karaa qalab kale oo la isticmaalayo software this .
4.It wareejin karaan xiriirada, wac gasho, sawiro, fariimaha qoraalka ah iwm
Ka dib waa hage deg deg ah user oo u oggolaan lahaa in dadka isticmaala si ay u gudbiyaan xiriirada ka iPhone in iPad.
User 1. baahan yahay in uu soo bixi iyo dajiyo barnaamij software-ka iyadoo la isticmaalayo URL http://www.wondershare.com/phone-transfer/ iyo waxa maamula si interface soo socda u muuqataa.
2.Beerta user markaas u baahan tahay in lagu xiro labada qalabka ay u kombiyuutarka aad u bilowdo hawsha.
3.Hadii ay kala iibsiga xiriir la markaas loo baahan yahay user uu leeyahay si loo hubiyo xiriir ah oo uu leeyahay in uncheck oo dhan xulashooyinka kale.
Button 4.The nuqul bilowga waxaa markaas in la sii adkeeyey si kala iibsiga bilaabmin.
5.The xulay files bilaabi doonaan in ay guuriso qalabka kale iyo geeddi-socodka si toos ah inuu kusoo dhamaan doono mar kala iibsiga la dhammeeyo.
Qalabka android in Screenshot waa ujeedooyin bandhigo tutorial this halkii android iPad waa in la tixgeliyo si ay u helaan in jihada saxda ah.
> Resource > iPhone > Transfer Xiriirada ka iPhone in iPad Si fudud oo fudud